Ubuyiselwe kakuhle kwiMbali yeVictorian
Nokuba le yeyesibini, isibini okanye iqela elincinci ukuhlala kwakho kweli khaya liyimbali kuya kukhunjulwa ngokwenene. Uya kuyithanda i-MBR suite enendawo yomlilo yegesi, i-whirlpool tub kunye nokuhamba kabini kwishawari yethayile yesiko. Kukho igumbi lokuhlambela elihle kakhulu eligcweleyo / ishawari kumgangatho omkhulu. Umgangatho ophantsi ogqitywe kakuhle unebhedi eyongezelelweyo ephindwe kabini kwindawo yokuhlala esezantsi kwaye kukho elinye igumbi elincinci lohlobo elineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Le ndlu yonke inokuqashwa ngeebhedi eziyi-10
Sizikhathalele kakhulu zombini iipropathi zethu kunye neendwendwe zethu zibe namava awoyikisayo. Nceda ufunde uphononongo lwethu ukuze ubone ukuba iindwendwe zethu zinike ubungqina obulungileyo malunga namava abo nathi. Sinamakhaya amabini anembali angakholelekiyo eWales, eWisconsin eziziindawo ezimangalisayo zokuchitha nosapho kunye nabahlobo.
Siyaxolisa ngokukhokelela kulo mhlathi ulandelayo. Sinamakhaya ashushu kwaye singabantu abafudumeleyo. Ngelishwa, sibe namava amabi ngeendwendwe. Sifuna kuphela ukurenta kwiindwendwe eziya kunyamekela ikhaya lethu ngenkuthalo kwaye ziphathe abamelwane bethu ngembeko. Asiwavumeli amaqela amakhulu, iindwendwe ezingezizo ngobusuku kwipropati (ngaphandle kwemvume ebhaliweyo) kwaye ngokuqinisekileyo asiwavumeli amaqela okusela ekholeji okanye amaqela enza ingxolo ngaphandle. Akuvumelekanga ukuba nendibano ekhayeni ngaphandle kwemvume ebhaliweyo, kwanaleyo inokuvunyelwa iya kuba ncinane kwaye ifune imali eyongezelelweyo kunye nediphozithi yesibambiso. Sikwafuna ukuba iindwendwe zethu ziqaphele ukuba sifakile iikhamera zokhuseleko lwangaphandle kwaye sibeke iliso rhoqo okwenzekayo kwipropathi. Ukuba ningabantu abalungileyo abaza kukhathalela ikhaya lethu niya kuwathanda ngokupheleleyo amakhaya ethu kunye namava enu. Kwakhona nceda ufunde uphononongo lwethu ukuze uqinisekise. Asifuni ukuba oku kufike kubanda, kodwa ngokwenene sifuna ukujonga iindwendwe ezingakufanelanga oko sikuthethileyo. Nceda ufunde yonke imithetho yendlu ngaphambi kokuba ubhukishe. Ngoku nceda ufunde kwaye ubone ukuba zibaluleke kangakanani iipropathi zethu ezimbini!
Okwangoku ujonge kuluhlu lomgangatho ophambili kunye nenqanaba elisezantsi leli khaya. Ukufikelela kweli xabiso kumagumbi okulala ama-4 aphezulu kutshixiwe nangona kunjalo uya kufumana umgangatho ophambili we-master suite ene-whirlpool tub, indawo yomlilo kunye nabantu ababini abahamba ngeshawari. Njengesiqhelo nguwe wedwa iqela ekhaya.
Kukwakho nelinye igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophambili olungele ukusetyenziswa kwakho. Kumgangatho osezantsi ogqityiweyo kukho ibhedi yokumkanikazi kwindawo yegumbi losapho elisezantsi kunye nelinye igumbi elincinci, elisecaleni elinocango elineebhedi ezimbini ezingatshatanga kulo.
Eli xabiso limiselwe abantu ababini. Olu luhlu lunokusetyenziswa ukubhukisha ukuya kuthi ga kubantu abathandathu kodwa kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-$35 yondwendwe ngalunye kwiindwendwe ezimbini. Ukuba niza njengendlu enye kuphela nabantwana benu kuphela ndikulungele ukusebenza nani kwintlawulo yabantwana benu.
Ukongeza kumgangatho ophambili kunye nenqanaba elisezantsi eli khaya likwabonelela ngeveranda ekhuselekileyo ekhuselweyo, ipatio entle enemingxuma yomlilo kunye netafile eyongezelelweyo yomlilo werhasi. Ukongeza kuyo yonke le nto, kukho i-cottage kwipropathi ukuze uyonwabele. Yindawo emangalisayo yokufumana amava kwaye ine-loft epholileyo abantwana baya kuthanda ukudlala kuyo. Yonwabela imifanekiso! I-cottage ivaliwe kwixesha elibandayo. Amalungiselelo akhethekileyo anokuxutyushwa ngentlawulo eyongezelelekileyo yee-R100 ukuze kuhlawulwe umsebenzi wokucoca ngokukhethekileyo nokuwuvumela ukuba ufudunyezwe ngoxa uyisebenzisa. Lo mrhumo ufunwa ukusuka kwimpelaveki phambi koMbulelo kude kube nge-30 kaMatshi.
Abaphambukeli baseWales bancedisa ekuzinziseni le fama ngeminyaka yee-1840. Eli lifa lasekwa nguRichard "King" Jones waseWales. Iinkonzo zokuqala zecawe, imitshato kunye nezinye zabanjwa kwelifa. UMnu. Jones wavumela abantu ukuba bahlale kwishedi yakhe ngoxa babesakha amakhaya abo. Wathiya ifama yakhe ngegama lefama yakhe eseWales, e-UK. Igama nguBronnyberllan.
Eli lifa libhalwe malunga nemibhalo emininzi epapashiweyo. Igqalwa njengelona khaya lidumileyo laseWales eWisconsin. Ngowe-1891 umlilo watshisa umhlaba wokuqala kaMnu Jones. Yaphinda yakhiwa ngoo-1890 yindoda egama linguCharles Williams. Kwakubhalwe ukuba uMnumzana Williams, indoda eyayimi kakuhle, emva koko yakha oko kuchazwa njengenye yezona zindlu zintle kwiDolophu yaseGenesee. Emva kwamashumi eminyaka okulima lusapho lakwaRees, bawuthengisa umhlaba wefama eli khaya laqhubeka kwinto ngoku eyaziwa ngokuba yiLegend eBrandybrook Country Club. ILegend yiklabhu yelizwe yabucala entle kunye nommandla ophakamileyo ojikeleze le ndawo. Ekugqibeleni, abakwaCavaiani bathenga eli khaya ngowama-2006, yaye yayiyintsapho yesine kuphela eyayinekhaya.
Yayifuna ukulungiswa kunye nokubuyiselwa kodwa ulonwabo lwabo umgangatho omhle weplanga wawungazange upeyintwe kwaye iifestile zeglasi ezinemibala zonke zazisele zisendaweni. Emva konyaka wokubuyiselwa, ukuya kwinqanaba lokuthelekisa iintlobo zemithi kunye nokusila iiCavaiani kunye nosapho lwabo lwabahlanu bafudukela kuyo. Abantwana bethu ngoku bakhulile, kwaye ababini kubo basekholejini kwaye omnye unonyaka oseleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ngenxa yoko, siye safudukela kufutshane kwikhaya elincinane yaye ngoku silawula eli khaya njengo-Airbnb. Kuluyolo ukwabelana nabanye ngeli khaya nokubona indlela abalixabisa ngayo.
Uya kubona i-4% yemali yolawulo ehambelana nokubhukisha. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le yintlawulo yokulondolozwa kwembali. Amakhaya ethu embali afuna ukhathalelo olongezelelweyo kwaye le mali isinceda ukuba sizigcine zikwimeko esemgangathweni yeendwendwe zethu. Ukubhukisha kwakho kunceda ukugcina la makhaya kwaye uwavumele ukuba wonwabele izizukulwana ezizayo.
Buza uJay malunga neendlela zokuhamba! Zininzi iindlela zomzila ezikufutshane.
Enye intle kwaye ikufutshane apho ungayifuniyo imvume yiRetzer Nature Centre.
Ezinye iinkqubo zePaki zePaki ezikufutshane zibandakanya iLapham Peak kunye neeTrayile zeScuppernong. Zombini ezo zintle! I-Lapham idume kakhulu kwaye ikufutshane (imizuzu eyi-10) iScuppernong imalunga nemizuzu eli-15 kwaye ikude kakhulu nabantu abancinci. Lapham kuya kufuneka uhlawule indawo yokupaka kwaye ukuba kukho ikhephu iindlela zezokunqumla ilizwe kuphela. Inayo inqaba ukujonga ngemibono yamachibi akufutshane. I-Scuppernong isoloko ivulekele ukuhamba intaba kunye nokupaka kwindawo ekufuneka uyihlawule kodwa ungapaka simahla endleleni, Hwy ZZ, kwaye simahla. Nceda uzive ukhululekile ukubuza imibuzo. Kukho ezinye iindawo ezininzi zokujonga. Ezinye zazo ziquka iParadesi Springs kunye ne-Ice Age Trail. Umkhondo we-Ice Age awukho umkhondo.
Sikumgama nje weekhilomitha ukusuka ku-MaMa Ds, indlu yekofu eyaziwayo kwindawo yonke. I-Western Waukesha County ibonelela ngeendawo zokutyela ezininzi ezimnandi kunye neevenkile ze-custard. Siku 25 yeemayile ngasentshona eMilwaukee. Siyindlu yokuqala yeLegend eBrandybrook Country Club. Amakhaya akwiindawo ezikufutshane akuluhlu lwesigidi seerandi.
Kukho ivenkile yekofu emnandi (uMama D) kanye ezantsi kwendlela. Ukongeza, ibhayisekile ye-glacial-drumlin egayiweyo kunye nentloko yendlela yokuhamba ingaphantsi kweemayile ezantsi kwendlela. Ekugqibeleni, kukho ezinye iindlela ezimbini zomzila kunye nehlathi lonke leKettle Moraine elikufutshane ukuze ujabulele. Jonga iZiko leNdalo iRetzer, iLapham Peak, iScuppernong Trails, iParadesi Springs kunye nokunye kokuhambahamba kunye nohambo.
Siye sayilungisa saza sahlala kule ndawo intle ishumi leminyaka kwaye ngoku kunye nabantwana bethu ekholejini sihlala kude nekhaya kwaye siqeshisa nge-Airbnb. Sifikeleleka ngokulula ukuze sikuncede ukulungiselela ukuhlala kwakho.